Analamanga Hatramin’ny 8 ora alina no afaka mividy solika
Noferan’ny avy eo anivon’ny sampan-draharaha Malagasy misahana ny famatsiana solika na OMH ho hatramin’ny 8 ora alina ny fahafahana mamatsy solika eny amin’ireo tobin-tsolika eto Analamanga manomboka izao.
Fahasahiranana Betsaka ireo mpanofa trano voaraoka
Tranga maro no iainan’ny vahoaka Malagasy nandritra ity fihibohana nateraky ny fiparitahan’ny COVID 19 teto amintsika ity.
Efa tena tsy zaka ny krizy Mangataka ny hiasa ireo mpikarakara lanonana
Nivory teny amin’ny Kianjan’ny Kanto Mahamasina ny mpanakanto sy ny mpisehatra rehetra eo amin’ny fikarakarana lanonana omaly 11 aogositra. Namoaka volavolan-kevitra hiraisana handinihana ny olana ateraky ny Fihibohona.Ventin-
Fanampiana ireo marefo Hanolotra 100 000 ariary mandritra ny roa volana ny Amerikanina
Ny governemanta amerikanina, tamin’ny alalan’ny sampandraharaha Amerikana ho amin’ny fampandrosoana iraisam-pirenena (USAID) dia nanolotra vola 5 tapitrisa dolara hanohanana ny “programme de transfert monétaire” na ny fandaharan’asa fandefasana vola,
Tsena Haraha-maso akaiky ny kalitaon’ny entana
Ankoatra ny fanaraha-maso ny vidin’entana eny an-tsena sy ny fitsirihana ireo manafina na mikasa hanafina entana dia ho araha-maso ihany koa ny kalitaon’ireo entana amidy rehetra eny an-tsena ao anatin’izao ahamehana ara-pahasalamana izao.
Ambohijatovo Nozaraina akanjo ireo sahirana ara-pivelomana
Mbola betsaka ireo olona tsy manan-kialofana mipetraka amin’iny faritra Ambonin’Ambohijatovo iny, indrindra hatramin’ny nisian’ny fahamehana ara-pahasalamana.
Ampitatafika 50 isam-pokontany no hahazo ny sosialim-bahoaka
Olona 50 isam-pokontany ihany no fantatra fa hahazo ilay fanampiana sosialim-bahoaka mampimenomenona ny maro ho an’ny kaominina Ampitatafika, distrikan’Antananarivo Atsimondrano. Io no tatitra farany azon’ny delege ao an-toerana raha araka ny fanazavan-dRandrianarivony Jocelyn,
Tetikasa izay vatsian’ny BEI, ny Vondrona Eropeana ary ny WSUP vola, izay hotanterahina mandritra ny telo taona. Mizara telo lehibe ny asa hotanterahina ao anatin’ity tetikasa ity toy ny fampitomboina ny famokaran-drano hihoatra ny 100 000 m3 isan’andro, ny fanorenana tobim-panadiovan-drano roa vaovao eny Ambohitrimanjaka sy Ankadindratombo, izay afaka hanadio rano 30 000m3 avy isan’andro. Fanitarana ny tobin’i Mandroseza izay hamokatra 40 000m3 isan’andro ary fanamafisana sy fanavaozana ny tambazotra efa misy. Tafiditra ao anatin’izany ny fametrahana na fanatsaràna fantsona mirefy 78 km, ny fanorenana siniben-drano vaovao miisa dimy izay manana hadiry mitontaly 12 000m3, ny fametrahana toby mpampiaka-tosika vaovao ary fanatsarana ireo efa misy. Hisy ihany koa moa ny fanitarana ny tambazotra mpitsinjara rano, ny fampidiran-drano any an-tokantrano sy paompin’ny daholobe, amin’ny alalan’ny fametrahana fantsona mirefy 105 km izay hitsinjara rano ho an’ny faritra Andrefana, Atsimo Atsinanana ary Atsimo Andrefana, Atsinanana ary Avaratr’Antananarivo. Mpanjifa vaovao miisa 5.000 koa no hahazo tombontsoa ary paompin’ny daholobe 400 ihany no hisitraka rano.